ကြောင်လေးတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးကို ဘာကြောင့် မညှပ်သင့်တာလဲ ? - Myanmarload
ကြောင်လေးတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးကို ဘာကြောင့် မညှပ်သင့်တာလဲ ?
16-Jun-2022 10am · 17 days ago
လူတော်တော်များများက ကြောင်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးဟာ ကြောင်လေးတွေကို အလှဆင်ပေးတယ်လို့ ထင်နေကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ အဲ့ဒီထက်ကိုပိုပါတယ်။ ဒီနှုတ်ခမ်းမွှေးတွေက ကြောင်တွေကို မှောင်နေတဲ့နေရာမှာ လမ်းမပျောက်စေဖို့၊ ခုန်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေမှာ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ခုန်မိစေဖို့အတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုတဲ့အပြင် သားကောင်အန္တရာယ်မှ လွန်မြောက်စေဖို့အတွက်လည်း အကူအညီပေးပါတယ်။
Virissae လို့ခေါ်တဲ့ ဒီကြောင်နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေက တောင့်တင်းတဲ့အမွှေးအမျှင် ပုံစံမှာရှိပြီး နှုတ်ခမ်းမွှေးတစ်ပင်စီဟာ ကြွက်သားနဲ့ အာရုံကြောစနစ်များကို ချိတ်ဆက်ထားကာ အလွန်အမင်းကို ထိလွယ်ရှလွယ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီအမွှေးအမျှင်တွေဟာ ဦးနှောက်ဆီကို အချိတ်အဆက်မိမိနဲ့ အသိပေးချက်တွေပေးပို့ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေက ကြောင်တွေရဲ့ ပါးနှစ်ဖက်မှာပဲ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့လေးတွေရဲ့ မျက်လုံးအထက်၊ မေးစေ့၊ မေးရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ ရှေ့ခြေသလုံးနောက်ဖက်တွေမှာလည်း ဒီအမွှေးအမျှင်တွေရှိပါတယ်။ ကြောင်တစ်ကောင်ဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို စူးစမ်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဦးဆုံး သူတို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ အဲ့ဒီအရာကို ညင်သာစွာပွတ်တိုက်ကာ ခံစားမှုတွေပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းမွှေးဟာ ကြောင်တွေအတွက်တော့ အာရုံခံပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်တစ်ကောင်ဟာ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် သူတို့တွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးဟာ အလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်တွေကို စဖို့အတွက် ခက်ခဲနေရတတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေ ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ သူတို့တွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီနှုတ်ခမ်းမွှေးတစ်ခုစီရဲ့အဆုံးမှာ proprioceptorလို့ခေါ်တဲ့ အာရုံခံအင်္ဂါရှိပြီး Proprioceptor က ကြောင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ခြေလက်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေဆီကို သတင်းအချက်အလက်တွေပေးပို့ပါတယ်။ကြောင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးများကို ညှပ်ခြင်းက လူတွေရဲ့ လက်ချောင်းအဆုံးတွေကို ညှပ်ခြင်းနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ကြောင်နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုသာ ညှပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကြောင်တွေကို မျက်စိလည် လမ်းပျောက်အောင် လုပ်သလိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။